Ungathenga kanjani ama-backlink a-PR9?
Inani lemoto engenayo nezixhumanisi zangaphandle yizinto ezimbili noma yikuphi umnikazi wewebhusayithi adinga ukucabangela ngaphambi kokuphetha ngokuphumelela komthombo wakhe wewebhu. Umthombo wewebhu ngaphandle kokugeleza kwezimoto njalo ngeke kuthathwe njengempumelelo, futhi umthombo wewebhu ngaphandle kwemoto eguquliwe ayikwazi ukuhlala khona.
Ake sicabange isimo okufanele ukhethe phakathi kwesayithi eliphezulu le-PR ngokuhamba kwe-traffic nendawo ephansi ye-PR kanye nezivakashi ezingu-2000 zansuku zonke. Yini ozoyikhetha? Ungakhetha noma isixhumanisi esilandelayo kusuka kusizinda se-PR esiphezulu, noma ungalandeli isixhumanisi esivela ku-PR. Yiqiniso, kunzima ukukhetha phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili - using different juice same coil. Uma uya ngokulandela, uzothola amathani omgwaqo, futhi uma uya ngokulandela, uzothola ukwanda kwezinga.
Kubalulekile ukuqonda umehluko emkhatsini wezinhlamvu ezilandelayo kanye nezixhumanisi ezilandelayo. Izixhumanisi ngetekisi elilandelayo zitshela izinjini ukuthi zingalandeli isayithi lakho ngokusebenzisa isixhumanisi noma ukuvimbela ijusi lokuxhumanisa eligeleza kulo. Ukuxhumana nomaka wokulandelela, ngesikhathi sabo, tshela izinjini zokulanda ukulandela ibhulogi yakho noma ukwabelana ngejusi lekhasi lakho.
Abaphathi bewebhu bavame ukwehla ukuphawula kokulandelwa kwamabhulogi ngenxa yokubaluleka kokusesha injini yokusesha. Ukuziphatha okunjalo kuholele ekuphakameni kwama-spam amazinga aphezulu. Yingakho isibalo esikhulu kakhulu se-blogs asikho ezinsukwini zethu.
Iyiphi ithrafikhi ebaluleke kakhulu noma i-backlink nokuthi ungathola kanjani kokubili?
Izinzuzo zezimoto zomzimba
Ngokungangabazeki, ithrafikhi yisidingo esiyinhloko samabhizinisi ngoba yiyo indlela abangathola ngayo ukubuyiswa okuphezulu ekutshaleni. Buza umbuzo ukuthi kungani uthuthukise ibhizinisi lakho le-intanethi? Impendulo ngokuvamile izoba efanayo - ukuthola imoto engaphezulu futhi uyiguqule ibe yimikhokha yokukhokha. Ngaphezu kwalokho, ukwandisa emotweni kwakha idumela lakho eliku-intanethi futhi kuphakamisa khona ukuxhumana kwakho kwezokuxhumana. Ungathuthukisa ithrafikhi yakho ngokusebenzisa iziteshi zenhlalo yomphakathi njalo. Futhi ngemva kwalokho, ukuphakama kwemoto yakho, kuphakamisa imali engenayo. Kodwa-ke, kunesidingo esisodwa esibalulekile sethrafikhi - akusiyo unomphela.
Iqiniso eliyaziwa ukuthi i-backlink iyabulala engxenyeni yanoma yimuphi umkhankaso wokwenza ngcono injini. Ukwandisa kuma-backlink kukunika isikhundla esiphezulu kumiphumela yemiphumela yokusesha kwandisa ukuthengisa kwakho. Ukuphakama kwakho okuphezulu, amakhasimende angase abe ngaphezulu azokwazi mayelana nomkhiqizo wakho. Amanye ama-backlink angafaka isitembu unomphela, ukukunikeza ukugeleza okungapheli kwe-traffic. Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi izinga lezingxenyeni zakho ezingenayo, i-Google ingabonga noma isilungise isayithi lakho. Uma lolu hlelo luthola izixhumanisi zakho zingatholakali ngokulinganayo, uzothola izijeziso ezinzima ezinganciphisa ukuthutha kwakho nokuthengisa.
Yingakho, kubalulekile ukusebenza ngomgwaqo, hhayi nge-backlink njengokuthola ukugeleza kwe-traffic kusayithi lakho, kuzomele ukhethe izixhumanisi ezingenayo noma kunjalo. Ngakho-ke, uma ufuna ama-backlink, bese usebenza ngomgwaqo.
Ungathenga kanjani i-backlinks ye-PR9?
Imithombo enjalo yewebhu njengowebhusayithi ye-Websiteoutlook, i-Alexa, i-Google, ne-Aboutdomain ingaba ngcono ngokuthola ama-backlink aphezulu kakhulu.Ukuze uthole amawebhusayithi afana nalawa, ungamane uqhube usesho lwewebhu phakathi kwamasayithi ku-niche yakho. Abakwa-Web crawlers bagca lesi siteshi njalo, yingakho kuyithuba lakho lokuthola isayithi lakho lixhunyiwe ngokushesha. Thumela umthombo wakho wewebhu eziningana zalezi zinsiza zokuhlaziya, futhi uzobona izitifiketi zanda ngaphansi kwamahora angu-24.